Budata Zoom maka Windows
Free Budata maka Windows (15.00 MB)
Mbugharị bụ ngwa Windows nke ị nwere ike ịbanye na mkparịta ụka vidiyo nụzọ dị mfe, nke a na-ejikarị eme ihe noge agụmakwụkwọ dị anya na nke nwere atụmatụ bara uru ma na-enye nkwado asụsụ English.
Otu esi eme oku oku mbugharị?
Mgbe ibudata ngwa Mbugharị, anyị abanye site na ịpị abụọ na mmemme ahụ. Na ihuenyo gosipụtara, anyị ji aha njirimara na paswọọdụ anyị abanye, ọ bụrụ na ọ bụla. Ma ọ bụghị ya, anyị mepụtara onye ọrụ.
Mgbe anyị banyesịrị, anyị pịa Nzukọ Ọhụrụ na akara Igwefoto Oroma na ihuenyo gosipụtara. Site na ịpị ebe a, ụfọdụ nhọrọ ga-apụta dị nokpuru. Nebe a, anyị na-amalite mkparịta ụka vidiyo site na ịpị mmalite na nhọrọ vidiyo.
Enwere bọtịnụ ịkpọku na ala nke ihuenyo ebe anyị na-ahụ onwe anyị. Mgbe ịpịrị bọtịnụ a, nhọrọ ịkekọrịta ọnụ ụlọ gị pụtara. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkekọrịta njikọ site na e-mail, anyị pịa bọtịnụ ndị dị netiti ihuenyo ahụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ izipu adreesị ozugbo, anyị na-enweta adreesị achọrọ site na ịpị nhọrọ nhọrọ URL na ala nke ihuenyo ahụ.
Mgbe ahụ anyị na-eziga onye a ga-ekere òkè na mkparịta ụka a ma bido mkparịta ụka a.
Olee otu isonyere a Zoom video nkata?
Itinye aka na mkparịta ụka vidiyo nke emepere na usoro Mbugharị dị mfe. Nke mbụ, ị ga-enwerịrị adres njikọ nke ụlọ ahụ. Onye ahụ meghere ụlọ ahụ kwesịrị izitere gị adreesị njikọ gị.
Mgbe ahụ i nwere ike isonye na mkparịta ụka ahụ naanị site nịsị isonye na nzukọ. Ọ bụrụ na ụlọ ahụ ezoro ezo, ị ga-etinye paswọọdụ mgbe ịpịrị bọtịnụ sonyere.
Mbugharị vidiyo ịkpọ oku vidiyo, nke ị nwere ike iji nefu, na-enye ọtụtụ nkọwa. Nwere ike ịlele Mbugharị ịkwụ ụgwọ ndị otu akwụrụ na saịtị a.
Nha faịlụ: 15.00 MB
Kacha ọhụrụ na: 29-06-2021
WhatsApp bụ ngwa dị mfe iji wụnye ngwa ngwa ị nwere ike iji na ekwentị mkpanaaka na Windows PC -...
Mbugharị bụ ngwa Windows nke ị nwere ike ịbanye na mkparịta ụka vidiyo nụzọ dị mfe, nke a...
Gịnị Bụ Skype, A Na-akwụ Ya ?gwọ? Skype bụ otu nime ndị kasị eji free video nkata na izi ozi ngwa...
Enwere ike ịkọwa esemokwu dị ka olu, ederede na mkparịta ụka vidiyo nke mepụtara site na ịtụle mkpa...
Popular ngwa izi ozi mkpanaka Viber dị ugbu a na Windows. Ekele maka ngwanrọ Viber Windows, ị...
BiP Messenger bụ ozi izipu ozi Turkcell na ngwa nkata vidiyo enwere ike iji na ekwentị mkpanaaka...
Mmemme nkata a pụrụ ịdabere na ya ICQ laghachiri na usoro ihe omume ya na nsụgharị ọhụrụ ya ICQ 8....
Ekele maka ụdị desktọọpụ nke LINE, ngwa izipu ozi mkpanaka, ịnwere ike ijikọ na akaụntụ EZIOKWU gị...
Enwere ike ịkọwa Twitch dị ka ngwa desktọọpụ Twitch na-arụ ọrụ na-achịkọta iyi niile kachasị amasị...
Cyber ​​Dust bụ ngwa izi ozi ngwa ngwa nwere sistemụ Snapchat nwere ike ihichapụ ozi na akpaghị...
Yahoo! Ozi bụ ngwa email nke Yahoo maka Windows 10 kọmputa na ndị ọrụ mbadamba. Anyị nwere ike ịsị...
TeamSpeak 3 bụ ihe omume na-ewu ewu karịsịa netiti ndị egwuregwu ma na-enye anyị ohere ịnwe...
Trillian, otu sọftụwia zuru oke ebe ị nwere ike ijikwa ọrụ izi ozi ngwa ngwa yana profaịlụ netwọkụ...
E nyere ndị ọrụ Windows 10 Facebook Messenger maka Windows, mmemme izi ozi nke Facebook kwadebere,...
Hangouts Chat bụ ikpo okwu izi ozi nke Google maka ndị otu. Ngwa a, nke na-adọta uche na myirịta...
Yahoo Messenger bụ ọrụ na - akwụghị ụgwọ ebe inwere ike izi ndị enyi gị ozi ozigbo ozigbo. Ihe...
ChatON bụ ngwa izi ozi mkpanaka nke a na-ejikarị na America na France nke Samsung mepụtara. Ngwa...
KakaoTalk bụ ngwa nzikọrịta ozi na nkata olu efu nwere ihe karịrị ndị ọrụ nde 100. Ọ dị nnọọ irè na...
Taa, enwere ọtụtụ mmemme ọzọ anyị nwere ike iji, ọkachasị mgbe anyị tụlere etu ngwa nkata olu siri...
Slack bụ mmemme bara uru, nefu na nke na-aga nke ọma nke na-abawanye nrụpụta azụmaahịa site na ime...
Mmemme Voxox so na mmemme nkata efu dị na ma Windows na igwe mkpanaka ndị ọzọ na PC, na-enye ndị...
Onye ọkwọ ụgbọ ala vidiyo SplitCam mebere na-enye gị ohere ibupu onyonyo site notu ebe vidiyo gaa...
Mmemme Mumble bụ mmemme oku olu karịsịa maka ndị otu na-egwu egwuregwu ịntanetị. Nihi na otu...
Confide bụ mmemme ga-eziga ozi ezoro ezo wee mee ka ahụ dị gị mma. Site na Confide, nke na-enye...
Ọrụ efu nke na-enye gị ọmarịcha interface iji AOL Instant Messenger kparịta ụka na ndị enyi gị ma ọ...
Ventrilo bụ otu nime mmemme ewu ewu ebe ndị egwuregwu ịntanetị na-akparịta ụka notu notu. Ihe omume...
Ripcord bụ onye ahịa nkata desktọpụ ị nwere ike iji dị ka ihe ọzọ na mmemme ewu ewu dị ka Slack na...
Ọ bụrụ na ị bụ otu nime ndị na-enweta oge imeta enyi ọhụrụ na kọmputa, soro ndị enyi gị na ndị...
ooVoo bụ mmemme efu na-enye gị ohere isoro ndị enyi gị na ndị ọrụ ibe gị kparịta ụka vidiyo nụwa...
Outlook bụ otu nime sọftụwia na-aga nke ọma nokpuru Microsoft Office, nrụpụta Microsoft na-ewu ewu...